Edemede nke frized • Ihe dị • Metal • osisi • Galvanized
Ogige ahụ ga-adị mma ma sie ike dịka nsu osisinke na-akwado ha. N'agbanyeghị ụdị ihe a ga-eji ha mee, ọ bara uru ịmụ banyere uru, ọghọm ya na ojiji nke osisi nsu na nke ígwè, igbe nsu i galvanized posts.
Offọdụ n'ime nhọrọ ndị a na-akwụ ụgwọ karịa, ụfọdụ na-adịgide karịa ndị ọzọ. Ha dịkwa iche na nwuwe nrụpụta na ihe eji achọ mma. Ederede n'ụdị bụ ihe dị iche iche Obere ụlọ ime obodo n’ebe ndị mmadụ na-anọkarị, tinyere akụkụ nke ogige zoro ezo.
Lee kwa: Ihe mgbochi akwa n'okporo ámá nke oge a dịka ihe eji arụ ọrụ n’obodo
Edere mgbidi dị okirikiri
Concrete bụ ihe siri ike nke na-agaghị ere ure ma ọ bụ wakpo ngwa ngwa site na ụmụ ahụhụ, nke pụtara na ọ bụ ihe na-adịgide adịgide nke ukwuu, ụlọ siri ike nke nwere ọrụ ndụ pụtara ogologo na ogologo.
N'ụzọ dị iche na nku osisi, igbe nsu A na-eme ha site na ihe anaghị emebi emebi na-enweghị ekpughe ma ọ bụ nke ahụhụ na-emetụta. Ndị ahịa na-ahọrọkarị ihe dị n’elu osisi, ọkachasị ma a bịa n’ịzọ ndị mmadụ n’ihu ọha.
Edere mgbidi dị okirikiri ha siri ike, na-adigide. Ha bụ ezigbo ihe ngwọta maka ụdị ụlọ ọ bụla, dị ka ugbo, ubi na ogige ya, yana oghere ọha - ọ na - ejikarị ya emechi ọnụ.
Edere mgbidi dị okirikiri enwere ike iji ya kwado ubi a gbara ogige. Ha ga-adịgide ruo ọtụtụ afọ ma enwere ike iji ha kwado ụdị panel ọ bụla.
Ejiri ọla nchara mee Galvanized
Abamuru ya galvanized nsu posts ike bu isi ihe. Ha anaghị atụ egwu ọnọdụ ihu igwe siri ike ma ha na-enwe ọhụụ na-enweghị atụ ruo ọtụtụ afọ.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-ahọrọ ile anya dị ka ọla nke galvanized n’elu aluminium, ebe ọ bụ na o yiri paịlị na-arụ ọrụ nke ọma. Ozokwa, n’ihi galvanized ígwè posts ha siri ike ma sie ike, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye akwụkwọ ikike ndụ ha niile.
Ejirila mgbidi kwụ ọtọ na-a ụdị ji achọ ngere ama maka ya anwụ ngwa ngwa. Okwu a bụ '' galvanized '' pụtara na a na-ekpuchi nchara nchara akwa zinc iji gbochie nchara na corrosion. Ejirila mgbidi kwụ ọtọ dị na ụdị na agba dị iche iche. Ha nwere ike ịbụ obere ma na-achọ mma, ma ọ bụ buru ibu - ha mezue ọrụ nchekwa dịka ngere na-akwado.
Uru mbu ogwe osisi Karịa ndị e ji osisi rụọ, ọnụ ahịa ha dị ala. Ejiri ígwè nkwụ ha dị ọnụ ala karịa, ma ịzụta ma wụnye. Ọzọkwa, enwere ike dochie ha ọnụ ala ma ọ bụrụ na emebi emebi na-enweghị mmezi.
Ejiri ígwè nkwụ bụ ezigbo nhọrọ maka ndị ahịa niile na-achọ usoro siri ike ma na-adịgide adịgide. Ha na-aghọwanye ndị na-ewu ewu ogwe osisi e ji agba okirikiri, nke bụ obere ihe na-ewu ewu maka kpochapụla mgbidi nsu.
Osisi - kpochapụwo ya na klaasị
Edere osisi nkwụ ha gbanyere mkpọrọgwụ na mmụọ anyị na akụkọ mgbe ochie. Osisi bụ ihe eji ama mma ma mara mma nke na-agaghị apụ na ejiji. Edere osisi nkwụ ha mara mma n'anya ma ọ baghị ọnụ. Ọzọkwa, ọ bụ ezigbo azịza nke ukwuu, ọ na-abịa n'ọtụtụ atụmatụ na ụdị dị iche iche. Agbanyeghị, echefula na osisi chọrọ mmezi yana nrụzi ahụ na-agwụ ike ma dị ọnụ.
N'adịghị ka ihe posts, nku osisi emela mgbawa ma ọ bụ bibie. Ọ bụrụ na obere mgbape pụtara na ihe, mmiri nwere ike ịbanye na kọlụm. Ọ bụrụ na mmiri dị n’ post ahụ fesa, ọ nwere ike ime ka mgbawa mụbawanye ka oge na-aga.
price nke ọ bụla nsu osisi
Dabere na ihe nlereanya na ihe eji eme ha ọnụ ala nsu osisi nke ha nwere ike ịdị iche iche. To ga-atụle eziokwu ahụ igbe nsu na-akacha ọnụ ahịa karịa ndị ibe ha nke osisi. Ọzọ, nkezi mgbidi nsu post ibu karịa kilogram 40 ma ọtụtụ mmadụ nwere ike ịgbakọta, nke na-ewe oge karị ma nwekwuo ụgwọ ọrụ ọrụ. Ejirila mgbidi kwụ ọtọ ndammana na ha ga-abụ ihe kachasị ọnụ, mana n'ihi ogologo ndụ ha na ntachi obi ha, ha ga-akwụ ụgwọ mgbe ogologo oge gachara.
Ọtụtụ ndị na-eche ebe ha ga-azụ nsu osisi na ụlọ ahịa DIY ndị ọzọ nwere ọtụtụ ngwaahịa ndị a. Agbanyeghị, ndị na-emepụta ihe eji eme ihe ngere ga-enwe ike ịnye ngwaahịa ngwa ngwa karịa, ya na nkenke. Ihe ọzọ bụ na ha agaghị abụ ngwaahịa ndị a na-ahụkarị nke ga-adọta mmasị nke ndị na-agafe agafe na-adọrọ mmasị.
Ndabere nke nzukọ - ya. esi gwuo miri n’ime ogwe osisi.
Ntinye nke ogige nsu bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa na usoro ịme mgbidi - ọ na - eme ka nkwụsi ike na nkwụsi ike nke ngere ahụ n'oge ikuku ọ bụla, mmiri ozuzo ma ọ bụ snowfall.
Ebe ọ bụ na iguzosi ike n’ezi ihe n ’ụlọ ahụ na-adabere n’usoro echichi na idobe nke posts, ọ dị mkpa ịmata esi gwuo miri n’ime ogwe osisi. Nke kachasị, nsu ga-akwụsi ike. Iji mezuo ọnọdụ a, ekwesịrị ili post 40 cm ruo 80 cm miri. Na post ahụ dị elu, a ga-agbakwunye ya n'ime ala.
Ọ bụrụ na anyị na-eme atụmatụ ịkwanye ájá ndị ahụ ájá ụrọ, tụkwasị na ịmara ya esi gwuo miri n’ime ogwe osisi, should kwesịrị icheta itinye akwa gravel na ala nke oghere ogidi. Nke a ga - enyere aka ịgbapu mmiri ma mee ka mgbidi ya bụrụ mmiri na - eguzogide. Ọ bụrụ na anyị na-egwu ala ájá, gravel agaghị arụ ọrụ nke ọma dị ka ihe njikwa. N'okwu a, ihe ga - abụ ụzọ kachasị mma iji dochie ihe mgbochi.
igbe nsuesi gwuo miri n’ime ogwe osisiigbe nsunsu osisiigbe nsucastorama nsu postsọnụ ala nsu osisinku osisiogwe osisi ncharaogwe osisi e ji agba okirikirigalvanized nsu posts